विशेषज्ञ चिकित्सक टोली गोरखाको बारपाक प्रस्थान - Sidha News
विशेषज्ञ चिकित्सक टोली गोरखाको बारपाक प्रस्थान
गोरखा । कोरोना महामारी फैलिएको आशंका गरिएको बारपाकमा गण्डकी प्रदेश सरकारले विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको टोली खटाएको छ । प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार बिकास मन्त्री रामशरण बस्नेत सहित प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. बिनोदबन्दु शर्मा नेतृत्वको चिकित्सक टोली शुक्रबार बिहान गोरखा सदरमुकामबाट बारपाक प्रस्थान गरेको छ ।
उक्त टोलीमा दुई जना विशेषज्ञ चिकित्सक, एक जना मेडिकल अफिसर, एक जना नर्सिङ अफिसर, दुई जना नर्सिङ स्टाफ लगायतका स्वास्थ्यकर्मी छन् । गोरखाबाट पनि डा. सन्दिप श्रेष्ठको नेतृत्वमा तीन जना चिकित्सक टोली खटाइएको छ ।
बारपाकमा कोभिड–१९ सँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएका बिरामीको संख्या बढे पनि परीक्षण गर्न स्थानीयले नमान्दा समस्या भएको छ । करिब १४ शय घरधुरी रहेको उक्त गाउँका ७० प्रतिशत घरमा ज्वरो र रुघाखोकीका बिरामी रहेको आंकलन गरिएको छ ।
जेठ महिनाको यो अवधिमा मात्रै १३ जनाको मृ’त्यु भइसकेको छ । उनीहरु मध्य तीन जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । अन्यले परीक्षण गर्न इन्कार गरेका थिए ।
अधिकांश घरमा ज्वरो र रुघाखोकीका बिरामी भए पनि उनीहरु कोरोना परीक्षणका लागि तयार छैनन् । रोेग लुकाउँदा गाउँमा भित्रभित्रै कोरोना महामारी फैलिएको आशंका गर्दै प्रदेश सरकारले चिकित्सक टोली खटाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार शुक्रबार मन्त्री बस्नेत सहित चिकित्सक टोली बारपाक प्रस्थान गरेको हो ।
बारपाकको घरघरमा पुगेर स्थानीयको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्ने र आवश्यक उपचार गर्ने गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. शर्माले बताए । ‘बारपाकको घरघरमा संक्रमित छन् भन्ने हाम्रो अनुमान हो,’ उनले भने, ‘त्यहाँ पुगेर जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी र राजनीतिक दलका नेतासँग छलफल गर्छौं, बिरामी भएकाहरुको घरघरमा जान्छौं, स्क्रिनिङ गर्छौं अनि आवश्यक उपचार पनि दिन्छौं ।’
उनीहरुको एन्टिजेन र पिसिआर विधि मार्फत कोरोना परीक्षण पनि गरिने उनले बताए । ‘अहिलेसम्मको जानकारी अनुसार त्यहाँ कोरोना संक्रमण छ, मुख्य समस्या भनेको मानिसहरु परीक्षण गर्न नआउनु हो, स्थानीय जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल लगायतका सरोकारवालासँग समन्वय गरेर सम्झाइ बुझाइ गर्ने र स्थानीयको कोरोना परीक्षण गर्ने योजना छ,’ डा. शर्माले भने ।
यही जेठ ५ गते नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग आएको स्वास्थ्यकर्मी टोलीले बारपाकमा स्थानीयको एन्टिजेन परिक्षण गरेका थिए । कुल ७८ जनाको परीक्षण गर्दा ३३ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । कोरोना फैलिएका कारण परीक्षणको दायरा बढाउन नेता श्रेष्ठले सम्बन्धित निकायलाई सुझाव समेत दिएका थिए । तर त्यसयता कोरोना परीक्षणमा स्थानीय सरकार सहित स्वास्थ्य कार्यालय असफल बनेपछि थप समस्या निम्तिएको हो ।
गाउँमा संक्रमण फैलिन थालेपछि बिहीवार वक्तव्य जारी गर्दै बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाले समस्या समाधानका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग सहयोग मागेको थियो ।